Maamulka iyo shaqaalaha Wasaaradda Howlaha Guud oo ka qeybgalay Is-xilqaan+sawirro – Hornafrik Media Network
Maamulka iyo shaqaalaha Wasaaradda Howlaha Guud oo ka qeybgalay Is-xilqaan+sawirro
Muqdisho (Hornafrik) Waxaa si habsami leh u soconaya barnaamijka is-xilqaan oo lagu dhisayo xarumaha danta guud,taasi oo qeyb ka ah fulinta baaqii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Mas’uuliyiinta iyo shaqaalaha Wasaaradda Howlaha Guud iyo dib u dhiska Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ka qeybgalay barnaamijka kisxilqana oo lagu dhisayo Tiyaatarka Qaranka,waxaana kamid ahaa Wasiirka Howlaha guud,Mudane Cbadi Aadan Hooswo,Agaasimaha Guud ee wasaaradaasi Axmed Maxamed Iman iyo agaasime Waaxyada oo uu hoggaaminayay Maxamed C/qaadir Xuseen Agaasimaha Waaxda Maamulka iyo Maaliyadda.
Gudaha dhismaha Tiyaatarka waxaa ka socda dacatir Xooggan,qeybaha uu ka kooban yahay,waxaana madaxda wasaaradda warbixin ka siiyay Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo ah Maareeyaha xarunta golaha Murtida iyo wacyigelinta.
‘’Maanta waxaa shaqada kujira wasaaradda Howlaha Guud,waa taqaaniin hal ku dhigga wasaradada Howlaha guud waa halyeeyadii shaqada badan keed la hor dhigi jiray,waxaana hoggaaminaya wasiirka Howlaha Guud iyo agaasimaha guuud,waxaana leenahay dalka kan dhisaya iyo kan duminaya kala durugsanoo kala darajo roon’’. Ayuu yiri Abawaan Guuri.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Howlaha Guud ayaa sidoo kale ka hadlay dowrkoodi ku aadan isxilqaan.
‘’Waxaa sharaf inoo ah in aan maanta wareegii 3-aad ee wasaraadda Howlaha guud aan isugu imaano dhismaha Tiyaatarka,iyadoo uu ina hoggaaminayo wasiirkeyna Hoosow oo balanqaaday in uu ku soo noqnoqonaya waxbadan,iyadoo la fulinayo awaamiirtii madaxda qaranka,marka wasaaradda howlaha guud oo wadata waaxyaheeda kaladuwan iyo Injineeradii waan ku faraxsanahay’. Ayuu yiri AGaasime Iimaan.
Mudane Cabdi Aadan Hoosow Wasiirka Howlaha Guud iyo Dib u dhiska Xukuumadda Soomaaliya ayaa bogaadiyay dadaalada ku aadan ka qeyb qaadashada dib u dhiska Dalka.
‘’Soomaaliya waa ay soo laabatay,Soomaali ahaadanahay waan soo noqonay dad badan ayaa rabay in magaceena uu baabo’o Soomaaliga xalaasha ah waxaa ka go’an in uu dhisto dalkiisa,war nikii dalkiisi burburiyo kaalay ka qeyb qaado dhismaha dalkaaga,waxaa rabaa in aan fuliyo balanqaadkeygi ahaa in aan halkan googto ku ahaado maadaama wasaarddu ay hormuud ka tahay howlahani’’.
Askar dhac iyo dil geysatay oo la xukumay